ပုရွတ်ဆိတ်ဆီမှသင်ယူစရာများ | Mg Ogga's Notes
Mg Ogga / April 22, 2009
ကျနော်အတွက် တိရ စ္ဆာန်ထဲမှာ ခွေး၊နွားပြီးရင် စတင်သိခဲ့တာ ပုရွတ်ဆိတ်ပါ
မူလတန်းအစ သူငယ်တန်းအင်္ဂလိပ်စာ ဖတ်စာအုပ်ရဲ့ ပထမစာမျက်နှာမှာ
Ant( အန်.)ပုရွတ်ဆိတ်ဟုအော်ကျက်ခဲ့ရဘူးသည်။ကျနော် နေမကောင်းလို.
ဆေးထိုးခံရတော့မယ် ဆိုရင် သားရယ်ပုရွတ်ဆိတ်ကိုက်သလောက်ပါ
ပဲဆိုပြီး အမေအားပေးတတ်တယ်။ နောက်မြန်မာစာမှာ ပုရွတ်ဆိတ်နဲ့
နှံကောင်ပုံပြင်အကြောင်းသင်တော့လည်း ဆရာမက ပုရွတ်ဆိတ်လို.အလုပ်ကြိုးစား
ပုရွတ်ဆိတ်တွေ ကကျနော်အတွက်တော့စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ သူတို့ဆီက နေပြီးကျနော်တို.တွေ အတူယူစရာတွေ အများကြီးပါ။သူတို.ဟာ ခန္ခာကိုယ်သေးငယ် သော်လည်း ကြံခိုင်မှုကမနိမ့်ပါဘူး။အမြင့်ကနေချ
ကြည့်ပါ သူတို. ဘာမှမဖြစ်ပဲနေလိမ့်မည်။ခန္ခာကိုယ်အလေးချိန် က ဧရိဟာထက်စာရင် အလွန်
ပေါ့ပါးတာကြောင့် စက္ကူတရွက်လို လေက ပင်တင်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်အမြင့်
ကျနော်တို.လူတွေမှာ စားဝတ်နေရေးတွေနဲ့လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေပြီး ဘေးအန္တရယ်တွေ
နဲ့တွေကြုံ၊အခက်အခဲတွေကို နောက်ကျော်လွှားရုန်းကန် နေရတာကြောင့် ကိုယ်ခန္ခာကျန်းမာ
သန်စွမ်းဖို.တင်တာမက စိတ်ဓာတ်ပါခိုင်မာဖို. လိုအပ်လာပါတယ်။လောကဓံနဲ့ အထု
အထောင်းကိုအပြုံးမပျက် ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို.လိုပါတယ်။ပုရွတ်ဆိတ်တွေ အမြင်ကကျလည်းဘာမှ
ပုရွတ်ဆိတ်တွေ ရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားမှာ မသေးလှပါ။ဇွဲနဘဲကြီးကြီး အလုပ်လုပ်ရုံ သာမက
ပြောင်းလဲတဲ့အခြေအနေပေါ် မှုတည်ပြီး လိုက်လျှောညီထွေ တုံပြန်နိုင်ပါတယ်။ရာသီဥတု
ရေ၊လေ အန္တရယ်တွေလွတ်အောင်လည်းရှောင်တတ် ကြိုတင်ခန်.မှန်းတတ်တယ်။နောက်
သူတို.ဆီတန်းလမ်းလျှောက်နေ ရှေ့အကောင်နဲ့အနောက်အကောင် မျက်ခြေမပြတ်တည်တည်မတ်မတ်လျှောက်ပြီး အခြေအနေတခုပြောင်းလဲ သွားရင် ဥပမာ သစ်ရွက်တရွက်
လမ်းကြောင်းပေါ်ကျခဲ့ရင် မျက်ခြေပြတ်ပြီး အနောက်ကအကောင်တွေ ဘယ်သွားရမှန်း မသိ
ချိန်မှာအရှေ့ကအကောင်ကနောက်ပြန်လည်လာပြီး မူလလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်ရောက်အောင်
တည်.မတ်ပေးပါသည်။သူတို.ဟာ လမ်းဟောင်းသွားသင်ချိန်မှာလမ်းဟောင်းလိုက်ပြီး လမ်း
သစ်ဖောက်သွားရမဲ့ အချိန်မှာလမ်းသစ်ဖောက်လမ်းသစ်လျှောက်ကြတဲ့ အာဂ ပုရွတ်ဆိတ်များ
ကျနော်တို.လူလောကမှာလည်း လမ်းသစ်ဖောက်တာတို. လမ်းဟောင်းတိုင်းလျှောက်တာတွေ
လမ်းဟောင်း၊လမ်းသစ်ဖောက်သစ်တဲ့ အခါလမ်းသစ်လျှောက်သင့်သည်ကို စဉ်စားဆုံးဖြတ်ဖို.
လိုပါတယ်။တခြားလူများကလည်း ထိုလူများဆုံးဖြတ်သည်ကို နာလည်သဘောပေါက်ဖို.လိုပါ
တယ်။ဒါမှလည်း ကျနော်တို. လူဘောင်သာယာလှပမည်မဟုတ်ပါလော။
ပုရွတ်ဆိတ်ချီးမွမ်းခန်းမပြီးသေးပါဘူး ပုရွတ်ဆိတ်တွေဆီမှာပရဟိတစိတ်ရှိပါတယ်။ သူတို.
ရှာသမျှ အစာတွေဟာ သူတို.အတွက်တင်မဟုတ်ပါ ။သူတို.မျိုးနွယ်စုအကျိုးစီးပွားအတွက်
အတွက်သာမြုပ်နှံထား လို.အပျော်အပါးလိုက်စားဖို. ကိုယ်ကျိုးစီပွားရှာဖွေဖို.တို.ကို ပရဟိတ
ဟူသော အကောင်းတရားက အလိုလိုထိန်ချုပ်ထားပေးတယ်။
လူမှုအကျင်သီလဟာ ဆန္နနဲ.ဆန်ကျင်ပြီ်းတမင်အောင်အီးထိန်ချုပ်တာမျိုးဟာ
လူနဲ့မြင်းနဲ.ကွာသလို အပျော်ထက်အများအကျိုးဦးစာပေးရာမှာ ပုရွတ်ဆိတ်များမှာ
အထိန်းအချုပ်မပါပဲ သဘာဝအလျှောက် ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ပဲ အများအကျိုးဆောင်ရွက်
ပျားတို.က သဘာဝဗီဇကြောင့်ကောင်းကွက်တွေဖော်ဆောင်နိုင်ပေမဲ့ တည်မြဲတဲတရား
အခြေခံပြီး သီလ၊သမာဓိ၊ပညာအဆင့်ဆင့် မြင့်တတ်လာမှသာ တည်မြဲတဲ့ ကိုယ်ရည်
တရုတ်ပြည်က နတ်ကွန်းတစ်ခုမှာ အမြဲ ၀တ်ပြုဆုတောင်းသူတစ်ယောက်ရှိတယ်။
နောက်ကြာလာတော့ ဒီနတ်ကွန်းက နတ်သမီးက ဒီဆုတောင်းသူကို ကိုယ်ယောင်ပြပြီး
ဆုပေးသတဲ့။ဘာဆုလည်းဆိုတော့ ပုရွတ်ဆိတ်တွေရဲ့စကား နားလည်နိုင်တဲ့ဆေးလုံး
လေးတလုံးပေးတယ်။ဒီလူဟာဒီဆေးလုံးကိုသောက်ပြီးတဲ့ အခါသူခြံထဲ ကကျောက်တုံးပေါ်
မှာပုရွတ်ဆိတ်၂ကောင်တွေပြီး အနားကပ်နားထောင်သတဲ့ ပုရွတ်ဆိတ်တစ်ကောင်က
တို.တွေနေရာပြောင်းကြစို.လို.ပြောတယ် နောက်တစ်ကောင်က ဘယ်ကိုပြောင်းမလဲဟုမေး
တယ်။ပထမအကောင်က ဒီနေရာကစိုစွပ်တယ်ကွ အောက်တည်.တည်.မှာရတနာသေတ္တာ
မြုပ်ထားတယ်ကွလို.ပြောတာ ကြားလိုက်တယ်။ဒါနဲ.တူးကြည်တော့ တွေပါလေရောရတနာ
သေတ္တာနောက်တစ်ကြိမ်နားထောင်ကြည်.တောမရတော့ တခါသုံးပဲ။ ဆုတောင်းတဲ့သူက
ဒီပိုစ်ကို တစ်ကြိမ်မကဖတ်နိုင်ပါတယ် ဖတ်ပြီးတိုင်းလည်း ကိုယ်အတွက်အသုံးချပြီး ရတနာ
Ref: အမှန်တရားကောက်ကြောင်းများ ၊ဒေါက်တာစီုးအောင်
April 22, 2009 in အက်ဆေး စာတန်း. Tags: Ant
← Socially Engage Buddhism
3 thoughts on “ပုရွတ်ဆိတ်ဆီမှသင်ယူစရာများ”
ဒကာလေးရေ မြင်သွားပြီ …
ပရွက်ဆိတ်ရဲ့စွမ်းရည်ကို တင်ပြတာတွေဖတ်ရတော့ သတိရစေတယ် အမှတ်ရစေတယ်၊ ဒို့မှာရှိတဲ့ စွမ်းရည်တွေ ဘယ်မှာ အသုံးချနေသလဲပေါ့။ သိတော့သိနေတယ် တချို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးလေ…။ ငါဟာ သတ္တ၀ါတွေအတွက်၊ လူမျိုးအတွက်၊ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးပြုလုပ်ရပ် သိပ်မရှိသေးပါလားပေါ့၊ ဒီလိုတွေးမိပြီးရင် များသောအားဖြင့် ၀မ်းနည်းကြ ပူဆွေးကြ ငိုကြွေးကြပါတယ်…၊ ဒီအ၀န်းအ၀ိုင်းထဲမှာတော့ ဘုန်းကြီးမနေတော့ပါဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမတွေကို ဘုန်းကြီးတို့တတွေ ရထားကြပြီပဲ၊ ဒီတော့ ပြီးခဲ့တာကို မပူဆွေးပဲ၊ ငါ့မှာရှိတဲ့ စွမ်းအားအကုန် သတ္တ၀ါအများအတွက် အသုံးချမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ဒကာလေးကော? စာဖတ်သူများကော?
ပရွက်ဆိတ်စွမ်းအားနဲ့ တရားတွေ တိုးစေမည်ပေါ့…။
ဒီနေ့မှ အမ သစ္စာအလင်း ဆိုဒ်မှာ ဖတ်ရင်းနှင့်ပဲ ညီလေးပုံကိုတွေ့တာနဲ့ နှိပ်လိုက်တာ..ဒီလိုနဲ့ ညီလေးဆိုဒ်နဲ့ မိတ်ဆက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်… ပရွတ်ဆိတ်ဆီမှ သင်ယူစရာများကို …. အတွင်း၊အပြင်၌ တွေ့မြင်ရသော သဘော သဘာဝတရားများကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်၍ ဉာဏ်မီးမှောင်ထိုးပြထားသည်မှာ လွန်စွာ သဘောပါ၍ ကျေးဇူးကြီးမားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…လေးစားစွာဖြင့် ဝင်းမြင့်